Sundbyberg waa degmada ugu baaxadda yar ee iswiidhan isla mar ahaan taasna waa midda ugu korriimaha fiican wadanka oo dhan. degmada waxeey sababtaas aawgeed ka mid noqotay degmooyinka eey guryahooda aadka isugu dhowyihiin. U dhawaanshaha eey u dhowdahay magaalada Stockholm iyo garoomada diyaaradaha iyo adeega bulshada oo fiican ayaa keenaya eey noqoto meel eey dadka oo dhan xiiseynayaan ineey degaan. Degmadu waxeey leedahay dukaamo, makhaayado, bangiyo iyo gaadiidka dadka oo heer sarreeya leh. Waxeey kaloo leedahay jaaliyado nolodhaqameed qani ah. Waxaa intaas usii dheer meelo fiican oo loo damaashaad tagi karo.
Degmada Sundbyberg waxaa ku yaal guryo nuucyo kala duwan leh oo aad ijaaran kartid ama aad gadan kartid. Mid ka mid ah mashruucyada dhisme ee ugu weyn Iswiidhan ayaa ka socdo meeshaan, Ursvik, waxeeyna sababi doontaa in dadka degan degmada eey sii bataan.
Sundbyberg waxeey leedahay shirkad guryaha kireeysa oo magaceedu yahay Fastighets AB Förvaltaren waxaadna ka kireysan kartaa guryaha. Waxaad saf u gali kartaa guryaha la kireysto haddii aad booqatid degmada boggeeda internetka. Dhalinyarada degan degmada, da’dooduna u dhaxeeyso 16 iyo 25 sano waxaa loo ballanqaadayaa ineey guri ka helaan degmada.
Degmada Sundbyberg waxaa ka jira jaaliyado badan, sida kuwa isboortiska, dhaqanka iyo muusikada. Waxaa jira jaaliyado loogu tala galay dadka howl gabka ah iyo kuwa loogu tala galay dadka qaxootiga ah tusaale ahaan jaaliyada Ereteriyaanka. Liiska jaaliyadaha oo dhameystiran waxaad ka heleysaa degmada boggeeda internetka.
Warbixin dheeraada oo ku saabsan degmada Sundbyberg waxaad ka heli kartaa degmada boggeeda internetka.
Degmada Sundbyberg waxaa ku yaal 40 iskoollada xanaanada carruurta ah (kuwo dowladeed iyo kuwo gaar looleeyahayba). Mid ka mid ah iskoolladaas waxuu furan yahay habeen iyo maalin waxaana loogu tala galay carruurta eey waalidiintoodu shaqeeyaan habeen iyo maalin.
Waxaa kaloo ku yaal toban meelaha carruurta lagu daryeelo ah oo sida guri camal ah, carruurtana eey kooxo yaryar u kala qeybsanyihiin.
Degmada waxaa ku yaal labo iyo toban dugsiyada hoosedhexe ah (kuwo dowladeed iyo kuwo gaar looleeyahayba). Iskoolladaas mid ka mid ah waxaa loogu tala galay carruurta cuuriyaamiinta ah iyo kuwa caqliga dhiman, ardaydaas waxaa lagu siinayaa iskoolkaas caawimaadka dheeraadka ah oo eey u baahan yihiin.
Degmada waxaa u dhow garoomada diyaaradaha ee Bromma iyo Arlanda. Waxaad u qaadan kartaa baabuur ama gaadiidka dad weynaha. Warbixin dheeraada oo ku saabsan gaadiidka dadweynaha ee degmada Sundbyberg waxaad ka heli kartaa degmada boggeeda internetka.
1 800 qof ayaa xarumaha degmada ka shaqeysa. Intaas kasokoow waxeey degmada rabtaa ineey dad kale sii shaqaaleeysiiso maadaama eey dad badan usoo guurayaan Sundbyberg si adeeg bulsho oo tayo leh loo siiyo dadka degmada degan oo dhan. waxaa jira shaqooyin bannaan oo laga raadsan karo iskoollada xanaanada carruurta iyo rugta daryeelka waayeelka. Shaqooyinka bannaan ee degmada Sundbyberg waxaa laga raadsan karaa degmada boggeeda internetka.
Är du vår nästa stjärna inom konferens och reception? Kontorsreceptionist
Säljare Bildelar Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Webbredaktör till spännande och expansivt företag i Sundbyberg Marknadskommunikatör
Vi söker en lärare i spanska till Älvkvarnsskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Head of E & P Solution Product Development Leader (238304) Produktutvecklare
Parksamordnare Driftchef, trädgård
Account Manager inom digital HR Account manager
Vikariat lärare i svenska , åk 7 - 9 på Älvkvarnsskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Meriterande deltids - jobb som projektadministratör hos Swedbank! Administrativ assistent
Vi söker städpersolal Städare/Lokalvårdare
Leg. Sjuksköterska till trivsamt äldreboende i norra Stockholm Sjuksköterska, grundutbildad
Erfarna redovisningskonsulter sökes omgående Redovisningsekonom
Dagvattenstrateg till expansiva Sundbyberg Miljöingenjör
Konferensvärd sökes till myndighet i Sundbyberg Receptionist, telefonist
Restaurangbiträde till Pizzeria Ursvik Sundbyberg Restaurangbiträde
Specialist inom informationssäkerhet Säkerhetsansvarig, IT
Solna 2,8 km
Uppsala 68 km
Norrtälje 69 km
Södertälje 39 km
Bogga internetka degmada ​